लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सको हकप्रद असार ३० देखि खुल्ने, आवेदन दिने कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सको हकप्रद असार ३० देखि खुल्ने, आवेदन दिने कहाँ जाने ?
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सले असार ३० गतेदेखि १००% हकप्रद बिक्री खुला गर्ने भएको छ । इन्सुरेन्सले १ः१ अनुपातमा ३९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । हकप्रदका लागि लगानीकर्ताले भदौ १ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लुम्बिनीको हकप्रदमा असार १२ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । लुम्बिनीको हाल चुक्ता पुँजी ३९ करोड रुपैयाँ छ । १००% हकप्रद बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा इन्सुरेन्सले ११ करोड ६१ लख २९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ३९ रुपैयाँ ७० पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २१९ रुपैयाँ २५ पैसा छ ।
यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सीबीआइएल क्यापिटलले गरेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं तथा लुम्बिनीको सेयर रजिष्ट्रार एस क्यापिटल लालदरबार काठमाडौंबाट आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले सीबीआइएल क्यापिटलमा चेकमात्र लिने र हकप्रद सेयर हक हस्तान्तरण गरी लिएका सेयरधनीको आवेदन एस क्यापिटलबाट मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, सिटिजन्स बैंकको उपत्यका भित्रका ठिमी, कुपन्डोल, ग्वार्को, बौद्ध र कलंकी शाखा तथा उपत्यका बाहिर बिर्तामोड, विराटनगर, धरान, वीरगंज, नारायणगढ, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, नेपालगंज, धनगढी, र महेन्द्रनगर शाखाबाट आवेदन दिन पाइनेछ ।